Ọdee akwụkwọ? Zọ asaa dị ike iji mee ka akwụkwọ gị bụrụ ọkachasị ahịa na mba | Martech Zone
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụrụ na ị bụ onye edemede na-achọsi ike mgbe ahụ n'oge ụfọdụ ị ga-arụ ọrụ, ị ga-ajụrịrị ajụjụ a, Otu esi eme ka akwụkwọ m bụrụ onye kacha ere ahịa? nye onye nkwusa ma obu ode akwukwo kachasi nma. Ọ ziri ezi? Ọfọn, ịbụ onye edemede, ọ bụrụ n'ịchọrọ ire akwụkwọ gị ruo n'ọnụ ọgụgụ ndị nwere ike ịgụ akwụkwọ ma nwee ekele maka ha mgbe ahụ ọ na-enwe ezi uche! O doro anya na ntụgharị dị otú ahụ na ọrụ gị ga-eme ka ị wulite aha gị karịa ka ọ dịbu.
Yabụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka a nụ olu gị mgbe ahụ ịkwesịrị iji nwayọọ na-aga nke ọma. N’ezie i ghaghi igbanwe akwukwo di anya ma o buru na edeghi ya nke oma. Mana, ewezuga ịtụle eziokwu nke ederede n'ụdị dị ukwuu, ị kwesịrị ilekọta ụfọdụ ihe ndị ọzọ iji mee ka akwụkwọ gị bụrụ onye kacha ere ahịa.
Chọrọ ịma ihe nzuzo nke ime ya? Mgbe ahụ, lee ụzọ isii ndị ị ga - esi mee ka akwụkwọ gị bụrụ okwu kachasị n'obodo. Naanị gụọ n'ihu na m kwenyesiri ike na ndụmọdụ ndị a ga-arụ ọrụ maka gị!
Gaa maka ihe ị kwenyere - Ọ bụrụ n ’ị na - ebu echiche n’uche gị na isiokwu ga - amasị ndị mmadụ ga - eme ka akwụkwọ gị bụrụ onye kacha ere ahịa. Kama, dee n’edemede dị iche iche nke masịrị gị ma chọọ ịgụ gbasara otu. Dị ka Carol Shield kwuru n'ụzọ ziri ezi, 'Dee akwụkwọ ịchọrọ ịgụ, nke ị na-enweghị ike ịchọta'. Yabụ, n'agbanyeghị na ị na-ede akwụkwọ monotonous n'ụdị eji eme ọ bụrụ na ị dee akụkọ metụtara gị mgbe ahụ enwere ohere ị ga - abụ onye kacha ere ahịa.
Họrọ maka isiokwu ziri ezi - Otu n’ime ihe kachasị mma nke nwere ike ịhapụ akwụkwọ akụkọ ka ọ pụọ na ndị ọzọ bụ isiokwu ya. Ndị na - agụ akwụkwọ gị ga - akwado akwụkwọ gị na ndị ọzọ naanị mgbe ha nwere ike ịkọwa ya. Ọzọkwa, ha na-enyefe mmadụ akwụkwọ mgbe ha hụrụ na akwụkwọ ahụ na-ezipụ ozi dị ndị ọzọ mkpa ịgụ. Yabụ, ị kwesịrị itinye oge na ume gị dị oke ọnụ iji chọpụta isiokwu ziri ezi maka akwụkwọ akụkọ gị.
Ka ụda ghara ịdị na-anọpụ iche - Ọ bụrụ na ụkpụrụ gị bụ ime ka akwụkwọ gị nwee ike ịmata ya n’ụwa niile mgbe ahụ ịkwesịrị ịde ya n’ụzọ nwere ike jikọọ ụdị ndị na - agụ ya. Ma, chere! Site na nkwupụta nke m, apụtaghị m na akụkọ gị kwesịrị ịdabere na ọdịbendị ụwa naanị. Nwere ike dee akụkọ banyere ihe dị gị n’obi, dịka obodo gị, omenaala gị ma ọ bụ ihe ọ bụla! Gbalia ihu na mkparita uka, akuko akuko, edemede na ihe ndi ozo. You na-echeta Booker chọr'inwe-eto eto nke 2015- A Brief History of Seven Gbuo? Ọfọn, m na-ekwu banyere ụdị ụda ahụ.
Chepụta 'Mkpuchi Akwụkwọ' gị iche - Anyị nwere ike ikwere na nkwupụta dịka 'Ekpela akwụkwọ akwụkwọ site na mkpuchi ya' ruo ọtụtụ afọ. Mana, n'ikwu, na mpempe akwụkwọ a na-ewepụta akụkọ ahụ niile n'ụzọ dị mfe nke edere n'ime. Yabụ, iji nye akwụkwọ gị otu ụdị ọdịdị na-ezube ịbụ ihe dị oke mkpa. Ma, echela na ọ dị gị mkpa iwepụ nnukwu ego maka ime nke a! Niile ị chọrọ bụ a okike mmebe onye bụ ọkachamara na-eme ka echiche na-ebi ndụ na okwu nke a classy akwụkwọ cover.
Họrọ maka onye nkwusa zuru oke - Ọ dị mma, mgbe a bịara ịtụgharị akwụkwọ ka ọ bụrụ akwụkwọ kacha mma mgbe ahụ onye nkwusa na-arụ otu n'ime ọrụ 'Kacha Mkpa'. Dị ịtụkwasị obi nke onye mbipụta ị na-ahọrọ ga-emetụta ntụkwasị obi nke akwụkwọ gị n'ụzọ dị ukwuu. Ya mere, echefula ịhọrọ onye mbipụta dị otú ahụ nke nwere ike ịhapụ eserese nke ire akwụkwọ gị ka ọ dị elu !!
Mepụta ibe akwukwo na akwukwo akwukwo na 'Goodreads' - Abia na ndi n’enwe akwukwo akwukwo, mgbe ahu Goodreads bu aha na-ewu uda !! Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ka akwụkwọ gị ree nke ọma mgbe ahụ ịkwesịrị ime ka ndị na-ege ntị nọ n'akụkụ ụwa niile hụ ya. Na, Goodreads bụ nhọrọ kachasị mma ịme ya! Ozugbo ịmechara akaụntụ na 'Goodreads', jụọ ndị enyi gị, ndị na-eso ụzọ ya, na ndị na-agụ akwụkwọ ka ha hapụ nyocha na saịtị ahụ ma ọ ga-emecha kwado ya na ndị ọrụ ndị ọzọ na weebụsaịtị a.
Jiri social media kpọsaa - N'oge a, ndị mmadụ na-etinye oge ha niile n'efu ka ha nọ n'ịntanetị na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta dị ka Facebook, Twitter, Instagram wdg .Ya mere, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhapụ echiche siri ike nke akwụkwọ gị n'ụwa wee jiri nyiwe ndị a zụọ ahịa akwụkwọ gị nke ga - eme ka ị mata ma ọhaneze. Chọrọ ịma etu? Ọfọn, ọ dị mfe ma dị mfe! Creatmepụta trailers akwụkwọ, ịkekọrịta akwụkwọ edemede, ịse akwụkwọ doodles ga-emere gị ọmarịcha.
Na-abịa na njedebe…
Ewezuga ihe ndị a dị mkpa ekwuru, ị kwesịrị idobe ihe ndị ọzọ n'uche gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme akwụkwọ gị kacha mma. Dịka, idezi na idezigharị akwụkwọ gị maka ọtụtụ oge, ibipụta nsụgharị ọbụlagodi, inwe weebụsaịtị onye edemede, izipu ozi ịntanetị na ndị debanyere aha gị, ide akwụkwọ na-adọrọ adọrọ blurb wdg ga-enyere gị aka ịbịa naanị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ahịa kacha mma. Ya mere, echekwala ọzọ! Naanị tụlee ndụmọdụ ndị a, gaa n'ihu, dee ma nweta akwụkwọ kacha mma nke mba gị n'oge na-adịghị anya.
Tags: onye kacha ere ahịakacha ereakwụkwọakwụkwọ nkaakwụkwọ na-ekpuchinkwalite akwukwoihe omaPublishingnkwalite mmekọrịta mmadụ na ibe yaide akwụkwọ
Sanket Patel bụ onye guzobere & Director nke Blurbpoint Media, SEO, na dijitalụ ahia ụlọ ọrụ. Mmasị ya maka inyere ndị mmadụ aka n'akụkụ niile nke ịntanetị na-agafe na mkpuchi ụlọ ọrụ ọkachamara ọ na-enye. Ọ bụ ọkachamara n’ahịa Web, njikarịcha Ngini Nchọpụta, Social Media, Mgbakwunye Mgbakwunye, B2B Marketing, Mgbasa Ozi ofntanetị nke Google, Yahoo na MSN.
Mmadu niile: Gbanwee ndi oru gi n’ime ndi mmadu